I-GSM Lungisa i-Fortnite APK Khuphela i-Android [uHlaziyo lwamva nje] - APKShelf
ngeposi: Aprili 15, 2021 Ngamana 5, 2021
Ukukhuphela kwe-GSM yokulungisa i-APK ye-Fortnite ye-Android [uHlaziyo lwamva nje]
Ngaba uyaphoswa ngumdlalo we-epic weFortnite kwifowuni yakho ye-Android kuba isithi isixhobo sakho asixhaswanga? Sukuba nexhala ngathi asikho apha kwaye silungisa into eyaziwa ngokuba yi-gsm fix Fortnite.
Imidlalo yokudlala kwi-Intanethi yinto ebandayo yokwenene, sonke siyayazi. Siyazi kakuhle ukuba yonke imidlalo ayilingani. Eminye imidlalo isinika umdla wokwenene kunye nokonwaba esikufunayo kwaye iFortnite yenye yazo.
Ikhutshwe ngo-2017 yimidlalo ye-Epic eneempawu zokudlala ngoku ikhoyo kuwe ukuze uzive uyolo lomlo. Ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo okt Gcina iHlabathi, iMfazwe Royale, kunye nokuyila kwe-Fortnite, umdlalo unento umntu onayo kuyo yonke incasa kunye neetalente.
Nangona usabelana nge-gameplay efanayo kunye ne-injini yomdlalo iindlela ezintathu zemidlalo zineendawo ezizodwa kwiqonga laseFortnite.
Idabi Royale likhululekile ukudlala umdlalo nje ngePUBGM apho ukuya kuthi ga kwi-XNUMX abadlali abalwa ukuze babe lijoni lokugqibela elime; I-Fortnite Creative inika abadlali inkululeko epheleleyo yokudala imihlaba kunye namadabi.
Gcina uMhlaba unesakhiwo se-post-apocalyptic apho umdlali kufuneka alwe nezinto ezinjenge-zombie ngelixa ukhusela i-gamer eyakhelwe izinto kumdlalo wokudubula wokudubula.
Ngaphandle kokuqaliswa kwivenkile zikaGoogle Play, iFortnite, njengoko kubonakala ngathi ayisiyo wonke umntu. Uninzi lwabathandi bomdlalo wefowuni badanile njengoko izixhobo zabo zingaxhaswanga ngumdlalo.
Kulungile kubantu abanjalo, sinamaqhinga okwabelana nabanye okuya kukwenza ukuba ukonwabele umdlalo njengabanye.
Malunga neGSM ilungisa iFortnite
Iikrini ze-GSM Fix Fortnite
Uyisebenzisa kanjani iFortnite APK Fix
Njengoko kucacile kwigama le app iza njengokulungiselela ukuqhuba umdlalo wabo bantu abangakwaziyo ukudlala umdlalo kwii-smartphones zabo ngenxa yohlobo lomdlalo olungasekelwanga kwivenkile yokudlala.
Ngokufaka olu setyenziso uya kuba nakho ukonwabela umdlalo omangalisayo kakhulu kunye nomlutha ofanelekileyo kwisixhobo sakho njengoko i-gsm yokulungisa i-Fortnite APK ivumela ukufakwa kunye nokusebenza komdlalo kwisixhobo se-android emva kokuba ukhuphele kwaye uyifaka kwifowuni.
igama GSM Fix i-Fortnite
ubungakanani 147.9 Mb
umbhekisi Imidlalo ye-Epic, Inc
Igama lepakheji com.epicgames.fortnite
Kwisiqendu, sichaze indlela yokukhuphela kunye nokufaka i-gsm fix Fortnite APK yabasebenzisi. Okokuqala, kuya kuya kukhetho lwefayile ye-APK yokukhuphela ngendlela yeqhosha ezantsi kweli nqaku ukuqala ukhuphelo.
Thepha / Cofa kwiqhosha (oku kuya kuqalisa ukukhuphela ngokuzenzekelayo).
Thepha / Cofa kwifayile ye-APK ngoku kulawulo lwakho lweselula
Thepha kwi-app kwaye unike amandla imithombo engaziwayo yeMithombo ukuvumela ukufakwa
Thepha ngokulandelayo ukufaka i-APK kwisixhobo sakho.
Ungasebenzisa iapp ngoku ukufikelela kwiinkqubo obukade uphulukene nazo kwisixhobo sakho.
Ukuba ulapha sicinga ukuba ubukhe waya kwivenkile yokudlala ukujonga ukuhambelana kwefowuni yakho. Ukuba ithi uxolo, ungaphoxeki. Nantsi indlela yokuyilungisa usebenzisa le app.
I-Fortnite ikhutshelwe inani lamazwe kwaye ayifumaneki kwihlabathi liphela, ukufikelela kumdlalo usebenzisa i-Fortnite APK fix kwaye uqhagamshele kwi-VPN, emva koko ukhethe ilizwe lase-US kwilizwe. Kukulungele ukudlala umdlalo.
Njengenqaku lokugqibela i-gsm fix Fortnite ngumsindisi kwabo bangakwazi ukufikelela kumdlalo besebenzisa ifowuni yabo yangoku ye-android nokuba kungenxa ye-specs okanye iinguqulelo zakudala zesoftware kwisixhobo.
Ungaqala ukudlala umdlalo ngokukhuphela usetyenziso olusisigxina kwiwebhusayithi yethu ngokucofa ikhonkco elinikezwe ngezantsi. Yonwabela umdlalo.
exhonyiweyo imidlalo yokuzonwabisaephawulweyo Ukulungiswa kwe-APK ye-Fortnite, I-GSM Fix Fortnite APK
Iingcinga ezi-4 kuUkukhuphela kwe-GSM yokulungisa i-APK ye-Fortnite ye-Android [uHlaziyo lwamva nje]"
Julayi 1, 2020 kwi-10: 53 am
Julayi 1, 2020 kwi-10: 57 am
Ikhonkco linikezwe u-bhuti
Julayi 2, 2020 kwi-11: 51 pm
Xa ndiyikhuphela ithi ayikahambelani ðŸ˜ umkhonyovu onje...
Julayi 3, 2020 kwi-9: 29 am
Bro, nceda ufunde iNqaku lonke kwaye ungenzi, ulibale ukusebenzisa i-VPN